Ukuthi Ibhizinisi Lakho Lingaguqula Kanjani Izivakashi Zewebhusayithi Ezingaziwa Zibe NguMholi | Martech Zone
Ngabe Ibhizinisi Lakho Lingaguqula Kanjani Izivakashi Zewebhusayithi Ezingaziwa Zibe Yihola
NgoMsombuluko, Okthoba 13, 2014 NgoLwesibili, ngoJuni 16, i-2015 Douglas Karr
Ngonyaka odlule, sihlolisise izixazululo ezahlukahlukene zamakhasimende ethu e-B2B ukukhomba ngokunembile izivakashi zewebhusayithi. Abantu bavakashela isiza sakho nsuku zonke - amakhasimende, abahola, abancintisana nabo, kanye nemidiya - kepha kujwayelekile analytics ayinikezi ukuqonda kulawo mabhizinisi. Ngaso sonke isikhathi lapho othile evakashela iwebhusayithi yakho, indawo yabo ingabonakala ngekheli labo le-IP. Lelo kheli le-IP lingaqoqwa ngezixazululo zenkampani yangaphandle, ukuhlonza kufakwe, kanye nemininingwane ethunyelwe kuwe njengomholi.
Ezinye zezixazululo ebesinazo bezisebenza kusuka kudatha yakudala, ezinye bezinendawo yokuxhumana esabekayo, ezinye bezingenakho ukukhetha ukuthuthukisa imibiko… bekukhathaza. Sasayina inkontileka yesisombululo esisodwa esingakaze sibuyekeze idatha yabo noma i-interface futhi ngeke basivumele siphume esivumelwaneni sethu. Njengoba abantu baseDemandbase babhalile, Umazisi wenkampani unzima kakhulu kunendlela ocabanga ngayo.
I-98% yezivakashi eziya kumawebhusayithi e-B2B ungalokothi ubhalise noma uguqule ukuze ungazi ukuthi yiziphi izinkampani ezazisesizeni sakho noma ukuthi zazifunani. Izixazululo zikaNdunankulu njengeDemandbase zinikela nangekhono lokwenza ngezifiso okuqukethwe kususelwa enkampanini evakashela isiza sakho - kuhle kakhulu.
Izinkampani ze-B2B zibona imiphumela emangalisayo ngokusebenzisa izinsiza ezinjengeDemandbase. Umsebenzi kuwebhusayithi yakho kanye nosesho oluhambisanayo olulethe izinkampani lapho zilusizo ekuhloleni amagoli, ekubekeni phambili, nasekuqondeni ukuthi kungenzeka yini ukuthi lithemba noma ikhasimende lifunani. Amandla okubona le datha ngesikhathi sangempela angasiza ithimba lakho eliphumayo lixhumane nethemba lapho isikhathi sibaluleke kakhulu - njengoba becwaninga ngemikhiqizo noma izinsizakalo zakho.
Umsebenzi wezivakashi nawo ungakhipha izexwayiso, ubhalwe ezinhlelweni zeCustomer Relationship Marketing (CRM) ezinjengeSalesforce, futhi wenze nemikhankaso yokukhulisa. Lobu ubuchwepheshe obunamandla obufanele ukutshala imali kubo.
Tags: ukubheka ip kwebhizinisiukuguqula ukuholakhomba imikhondokhomba izivakashikhulisa ukuguqulwaInfusionsoftip ukubhekaimicrosoft dynamics crmsalesforceI-SugarCRMukuhlonza izivakashi zewebhusayithiIzincwadi Zokusebenzela.comI-Zoho
Imaphi Amathuluzi Ahlobene Nedatha Abathengisi Abawasebenzisayo Ukukala Nokuhlaziya?
I-plugin yenkinobho yokwabelana engcono kakhulu ye-WordPress